Madaxweynaha Puntland oo la kulmay haayadaha QM ee ka shaqeeya gudaha Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland oo la kulmay haayadaha QM ee ka shaqeeya gudaha Puntland
August 16, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxweynaha dowlada Puntland oo haayadaha Qaramada Midoobay kulan kula yeeshay Garoowe. Sawirka: Xafiiska warfaafinta madaxweynaha Puntland.
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Talaado ah kulan kula yeeshay xarunta madaxtooyada Puntland ee Garoowe haayadaha Qaramada Midoobay ee fadhigoodu yahay magaalada Garoowe, kuwaasoo dowlada kala shaqeeya arrimaha insaanimada iyo mashaariicda hrumarineed.
Kulanka ayaa waxaa diirada lagu saaray waxyaabihii qabsoomay iyo waxyaabaha ka dhiman mashaariicaha sanadkan 2016-ka ee ay haayadaha QM ka fuliyeen gudaha Puntland.
Sidoo kale kulanka waxaa looga hadlay sidii Mashaariicaha muhimka ah ee haayadaha QM ka fuliyaan magaalooyinka waaweyn ee Puntland loo gaarsiin lahaa gobolada iyo deegaanada laamiga ka baxsan, waxaana lagu ammaanay haayada UNDP mashruuca buundada ee ay ka dhistay jaamka degmada Xaabo ee gobolka Gardaguu, jaamkaas oo dhib badan ku hayey bulshada degmada Xaabo iyo ardayda wax ka barata dugsiyada xaafadaha kala duwan ee degmadaasi.
Ugu dambayna, haayadaha QM oo ay ugu horeyso UNDP ayaa mashaariic badan oo horumarineed ka fuliyay gudaha Puntland tan iyo markii la asaasay dowlada Puntland 1998.
July 2, 2016 Madaxweynaha dowlada Puntland oo la kulmay shacabka Gaalkacyo